မျိုးစိတ်: H. sapiens
မျိုးစိတ်သေး: H. s. sapiens
↑ Groves, C.P. (2005). Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference, 3rd, Baltimore: Johns Hopkins University Press. ISBN 0-801-88221-4. OCLC 62265494.
"https://my.bywiki.com/w/index.php?title=လူသား&oldid=365337" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ မေ ၂၀၁၇၊ ၁၄:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။